Jubbaland ayaa war ka soo saartay arrimaha ku aadan qabsoomida shirka Dhuusamareeb 3… – Hagaag.com
Jubbaland ayaa war ka soo saartay arrimaha ku aadan qabsoomida shirka Dhuusamareeb 3…
Madaxtooyada Jubbaland ayaa war ka soo saartay arrimaha ku aadan qabsoomidda Shirka Dhuusamareeb 3 iyo hagardaamo ay ku eedeysay inay waddo Villa Somalia.
Warka ka soo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa marka hore lagu sheegay in Dowladda Somalia ku dhisan tahay nidaam federalism ah, ayna leedahay dastuur ku-meel-gaar ah, oo kala hagga hay’adaha kala duwan ee dalka, isla-markaana ay Jubbaland u taagan tahay ilaalinta shuruucda dalka.
Warka ayaa lagu sheegay in Xukuumadda Somaliya loo igmaday inay wax ka qabato arrimaha ammaanka, dhameystirka dib-u-eegista Dastuurka iyo xoojinta wada-shaqaynta Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, si loo suurtageliyo inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah 2020/2021, nasiib-darrase saddex sano iyo bar kadib baa warka lagu yiri waxaa cadaatay inaanan waxba laga qaban kaabayaashii suurtagelin lahaa in doorasho qof iyo cod ah waqtigidii loogu talagalay ku dhacdo.
Jubbaland ayaa sidoo kale sheegtay in dadaalo badan kadib lagu guuleystay in bishii hore ee Luulyo, ay Magaalada Dhuusamareeb ka qabsoomaan shirar la xiriira soo celinta wadashaqaynta Dowladda Federaalka iyo Dowladda Goboleedyada iyo qabsoomidda doorasho xilligeeda ku dhacda 2020/21, taas oo muhiim u ah masiirka dalka. Shirarkaasi waxay yididiilo geliyeen sida warka lagu sheegay umadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee Somalia, oo marwalba la garab taagan taageeradooda.
Kadib shirkii 22-kii bishii Luulyo lagu soo geba-gabeeyay Magaalada Dhuusamareeb ayay Jubbaland sheegtay in hoggaanka dalka uu qaaday tallaabooyin aan u adeeggayn hirgelinta wixii lagu heshiiyay.
Jubbaland ayaa ugu dambeyn sheegtay inay u taagan tahay, sidii loo badbaadin lahaa qodobadii ka soo baxay Shirarkii Dhuusmaareeb 1 & 2 iyo sidii heshiis buuxo oo siyaasadeed looga gaari lahaa qabsoomidda doorasho leysla ogolyahay.
Jubbaland waxay Beesha Caalamka ugu baaqday in ay Soomaalida ka caawiso qabsoomidda Shirka Dhuusamareeb 3 oo loo dhanyahay, lagana miro dhaliyo natiijooyinkiisa.